Wada hadalada Galmudug iyo Ahlu sunno oo beri Furmaya - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Wada hadalada Galmudug iyo Ahlu sunno oo beri Furmaya
Wada hadalada Galmudug iyo Ahlu sunno oo beri Furmaya
April 14, 2017 admin289
Maamulka Galmudug ayaa sheegay wada hadalka u dhaxeeya Galmudug iyo Maamulka Gobolada Dhexe ee Ahlusunna in uu furmi doono, si loo sii amba qaado wada hadalka labada dhinac.
Wasiirka Dastuurka iyo Dib u heshiisiinta Maamulka Galmudug Cusmaan Maxamed Cali (Socdaal) oo la hadlay Risaala ayaa sheegay in berri oo Sabti ah Magaalada Muqdisho uu ka furmi doono wada hadal u dhaxeeya Ahlusunna iyo Galmudug.
Waxa uu sheegay wada hadalkan oo ay garwadeen ka tahay Dowladda Federaalka, in ay rajeynayaan in uu ka soo baxo wax labada dhinac ay ku heshiiyaan oo shacabkana lagu hormariyo.
Sidoo kale Cusmaan Maxamed Cali Wasiirka Dastuurka iyo Dib u heshiisiinta Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay diyaar yihiin dhinacyada wada hadlaya, isaga oo sidoo kale sheegay in la soo saaray War-saxaafadeed arrintan la xiriirta.
Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa dhowaan ku heshiiyay in dib loo dhigo Doorashada Madaxweynaha Galmudug oo 10-kii Bishan lagu balansanaa in ay dhacdo, balse la isku afgartay in 30-ka Bishan la qabto.
Maraykanka oo ciidamo u soo diray Soomaaliya
Ciidamada Itoobiya oo isaga baxay Dhuusomareeb